राजनीति – Siddhakali media
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले प्रचण्ड लाई हौसला दिन आफुले धेरै गरेको बताएका छन । प्रचण्ड जि फुर्केमान्छे हुनुहुन्छ ? पाटी अध्यक्ष हुँदै हुनुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री पद तपाईंलेनै चलाउनुहोस भनेर फुर्क्याइदिएको भए उहाँ मान्नुहुन्थ्यो ,´ओलिले बुधबार एक अन्तरबार्ताका कार्यक्रममा भने ,` फुर्याउन त कति फुर्क्याए ,समधुर बासुरी बझाएर ,सितार गितारका धुन सुनाएर […]
ओलिलाइ चारै तिर बाट घेराबन्दी ,के यसपाली सत्ता संकट टर्ला त?
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि राजनीति जिबनकै सबै भन्दा ठूलो घेरा बन्दिमा परेका छन । दुई पट्क आफू विरुद्धको घेराबन्दी तोड्दै सत्ता जोगाएका ओलिलाइ यश पटक भने निक्कै ठूलो चुनौती छ । ओलि एस्तो घेरा बन्दिमा छनकी कुनै पनि बेला उनको सत्तामाथी छापामार शैलीमा प्रस्तुत हुनसक्छ । नेकपा एमाले भित्र ओलि घेरा बन्दिमा छन । नेपाली […]
काठमाडौ चैत २कम्युनिस्ट पाटी नेकपा एमालेको २ समुहलाइ मिलाउन बामदेव गौतम लगभग सफलता नजिक पुगेका छन । उनको पहिले आज धुम्बारहिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपि शर्मावली समेत रहेका ओलि र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल बिछ भेटबार्ता भएको छ । गौतमले कि यता कि उता गरौं भनेर नेताहरू सङ्ग छलफल चलाएर भेट बार्ताको अवस्था […]
मन्त्री परिषद्को बैठक बस्दै- सिद्धकालि डट कम
चैत १मन्त्री परिषद् बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अहिले केहि बेरमा बैठक सुरु हुन लागेको हो । यश अघि मन्त्री परिषदको नियमित बैठक सोमबार बस्दै आएको थियो । आजको बैठकमा के बिषमा छलफल भन्ने कुरा आफुहरुलाइ एण्जेन्डा थाहा नभएको एक मन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका छन।फायल फोटो
नेपाल,खनाल र गौतम एकजुट भएर पाटी फुटाउने तयारी ,पाटिको नाम नेपाली कम्युनिस्ट जुराउने तयारी
फागुन २९नेकपा कम्युनिस्ट पाटी एमाले फेरि फुट्ने अबस्थामा पुगेको छ । अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले शुक्रबार बरिस्ठ नेताहरुलाइ केन्द्रिय सदस्य सिमित पारेपछी फुट्ने अबस्थामा पुगेको हो । ओलिले घुमाउरो तरिकाले नेपाल ,खनाल र उपाध्यक्षमा सर्बाधिक मत ल्याएर नवौं माहाधिबेशनमा निर्वाचित उपाध्यक्ष बामदेब गौतमलाई कारभाइ गरे पछि फुटेको संघारमा एमाले पुगेको हो । […]
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एमाले सङ पाटी एकीकरण गर्ने रहर देखाउनु भएको छ । पाटी केन्द्रिय कार्यलयमा आयोजित स्थाइ समितिको बैठकमा उहाले सञ्चार कर्मिहरुलाइ बैठकमा बोलाउनु भयो । त्यस पछि निर्वाचन आयोग बाट दुइटा पत्र सञ्चार कर्मिकै अगाडि पढेर सुनाउनु भयो । एउटा पत्रमा निर्वाचन आयोगले पुन पाटी एकीकरणका लागि पठाइएको […]
प्रचण्डले नेपालकै हैसियतमा निकाले बिज्ञप्ति
फागुन २४-सर्बोच्च अदालतको फैसला आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालकै हैसियतमा बिज्ञप्ति निकालेका छन । १११ औं अन्तर्राष्ट्रियश्रमिक महिला दिवसको अवसरमा दाहालले एकल हस्ताक्षर सहित नेकपाकै हैसियतमा आज बिज्ञप्ति जारी गरेका हुन । हिजो मात्रै सर्बोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा फैसला गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको थियो […]
अब वामदेव कता ?के होला उनको राष्टिय सभा सदस्य पद ?
सर्बोच्च अदालतले नेकपा बिबादमा ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युताइदिए पछि नेकपा उपाध्यक्ष बामदेब गौतम कता जालान ? भन्ने बिषयमा आम जनमानिसमा अडकलबाजी तिब्र भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले संसद विघटन गरे पछि दुई चिरामा बिभक्त सत्तारूढ नेकपा कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा ) सर्बोच्चको फैसला सङै नेकपा एमाले […]
आज नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक बस्दै
नेपालि काङ्ग्रेसले समसामयिक राजनितिक बिषयमा छलफल गर्न आज पाटिको संसदिय दलको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे संघिय संसद भवन बानेश्वरमा बस्दै छ । बैठकमा प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा प्रतिपक्ष दलका रुपमा कसरी प्रस्तुत हुने सम्बन्धमा छलफल हुने संसदिय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनु भयो । सरकारले गत पुस ५ गते […]
35,575 total views, 747 views today